Maraykanka oo ”axsaan” lama filaan ah u sameeyey dalka Iiraan (Waa maxay?) | Hadalsame Media
Home Arrimaha Caalamka Maraykanka oo ”axsaan” lama filaan ah u sameeyey dalka Iiraan (Waa maxay?)
Maraykanka oo ”axsaan” lama filaan ah u sameeyey dalka Iiraan (Waa maxay?)
(Tehraan) 26 Dis 2020 – Iiraan ayaa sheegtay inay Maraykanka ogolaansho ka heshay si ay u dirto lacag ay tallaalka coronavirus uga soo iibsanayso dibedda, sida uu sheegay Bankiga Dhexe ee dalkaasi.
Guddoonka Bankiga, Abdolnaser Hemmati, ayaa hilinka dowladda u sheegay in ay rukhsad ka heleen Xafiiska Hantida Dibedda ugu qaybsan Wasaaradda Maaliyadda Maraykanka ee OFAC si ay lacagtooda ugu diri karaan Swiss Bank taasoo ay ku bixinayaan tallaalka Covid-19.
“Iyagu [Maraykanku] waxay cunaqabatayn naga saareen bankiyadeenna oo dhan. Tan oo qura ayay aqbaleen kaddib markii cadaadis caalami ah la saaray,” ayuu yiri Hemmati.
Wuxuu sheegay in Iiraan ay bixinayso lacag dhan $244m si ay usoo iibsadaan qaybta hore ee tallaalka oo ah 16.8 milyan oo kuuro oo ah tallaalka ay hayso Covax, oo ah sharikad caalami ah oo u xil saaran in sicir macquul ah tallaalka lagu siiyo dalalka uu dakhligoodu hooseeyo ama meel dhexaadka yahay.
Iiraan ayaa horay marar badan u sheegtay inuu Maraykanku ka hor taagan yahay inay talllaalka kasoo iibsadaan Covax, oo ay heshiis kula jiraa 190 dal.
Previous articleWar lagu farxo oo usoo yeeraya Soomaalida rajada ka leh in Maraykanka loo qaado
Next articleJOOJI: Laba arrimood oo aan wanaagsanayn oo laga calaameeyey ciyaaraha Maamul-goboleedyada